मुलुकको अस्तित्व र पृथ्वीनारायण शाहको योगदान
पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिन पौष २७ लाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउँदै आएकोमा देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पछि यो पर्वलाई कटौति गरिएको अद्यावधि कायम नै छ । यो राष्ट्रिय पर्वलाई राज्यको तर्फबाट मनाउन किन छोडिएको हो, त्यसको तर्कसंगत जवाफ अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विना आधार कारण सरकारले राष्ट्रिय पर्वको सूचीबाट हटाएको पृथ्वी जयन्तीलाई राज्यको तर्फबाट नमनाए पनि नागरिकको तर्फबाट भने मनाइंदै आइएको छ । केही वर्ष यता नेपाल एकीकरण गरी स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र स्थापना गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निभाउने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राज्यको तर्फबाट निरन्तरता दिनु पर्ने आवाज जनस्तरबाट उठे पनि सरकार भने सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ ।
पौष २७ गते मनाइने पृथ्वी जयन्तीका सम्बन्धमा सरकारले कुनै निर्णय गरेन । तर राष्ट्रपतिले पृथ्वीनारायणको सिंहदरबारस्थित शालिकमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ ।
कुनै पनि देश निर्माणमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तित्वको स्मरण र सम्मान गर्नु राष्ट्रिय कर्तव्यको रुपमा लिइन्छ । नेपाल एकीकरण गर्ने नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले लिएको ऐतिहासिक तथ्य सर्व स्वीकार्य छ । कसै कसैले एकीकरणका क्रममा भएका सानातिना त्रुटिहरूलाई छायामा पार्ने दुष्प्रयास गर्दै आएका भए पनि उनीहरूले एकीकरण नै गलत भएको भन्ने हिम्मत र सहास अझैसम्म गरेका छैनन् । केही वर्ष यता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई स्वीकार पनि नगर्ने, अस्वीकार पनि नगर्ने मनस्थितिबाट सरकार गुज्रीरहेकोले यस विषयमा राष्ट्रिय वहस हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
जतिबेला अंग्रेज साम्राज्यले अजिंगर झैं एशियाका एक पछि अर्को देशलाई निल्दै थियो, त्यतिबेला अहिलेको नेपाल बाइसी, चौबीसी लगायत साना साना ५२ वटा राज्यमा विभाजित थियो । अंग्रेज साम्राज्यले भारतलाई निलेर नेपाल माथि आँखा गाड्न थालेको थियो । एक अर्कोमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका यी साना साना नेपाली राज्यहरूले अंग्रेज साम्राज्यसँग प्रतिरोध गरी आफूलाई बचाउने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यतिबेला साना साना राज्यहरूको एकीकरणबाट बन्ने नयाँ शक्तिशाली राज्यले मात्र अंग्रेजसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने स्थिति थियो । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता गुम्ने दिन निकट आइरहेको देखे, बुझेका विभाजित राज्यहरूका जनताहरूको चाहना एकीकरणको पक्षमा थियो । गोर्खा जस्तो सानो पहाडि राज्यका यूवा राजा पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता आत्मसात गरी जन एकीकरणको नेतृत्व लिएका थिए ।
वर्तमान नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरणको जगमा खडा भएको छ । एकीकरणले स्थापित गरेको यो जगलाई भत्काई दिँदा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलु्कको रुपमा नेपाल रहन सक्ने स्थिति छैन
उर्लंदो. र उन्मत्त अंग्रेजहरूको साम्राज्य विस्तारको अभियानलाई यो एकीकरणले रोकेकोले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा रहन सकेको ऐतिहासिक तथ्यले. पुष्टि गर्दछ । अंग्रेजहरूको साम्राज्य विस्तारमा यो एकीकरण बाधक बन्दा एशियाका अन्य देशहरूको पनि स्वतन्त्रता बचेको त्यति बेलाका घटनाक्रममा देखिन्छ । त्यति बेला अंग्रेजहरूले भूगोलको विस्तार गर्ने मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृति र भाषिक साम्राज्य विस्तार गर्ने नीति पनि अबलम्बन गरेको पाइन्छ । उनीहरूले आफ्ना साम्राज्य विस्तार गरेका देशहरूमा त्यहाँको मौलिक धर्म, संस्कृति समुल नष्ट गरी क्रिश्चियन धर्म र अंग्रेज संस्कृति स्थापना गर्नमा विशेष प्राथमिकता दिएबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ । नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, सामाजिक मुल्य–मान्यता र परम्परा बचाउन पनि यो एकीकरणले ऐतिहासिक भूमिका निभाएको थियो भन्दा अतिशयुक्ति हुँदैन ।
यो एकीकरण एउटै धर्म, संस्कृति र सामाजिक मुल्य मान्यता भएका साना साना देशहरू बीच भएकोले भत्किएको, टुटेको सामाजिक र संस्कृतिक मुल्य मान्यतालाई पुनः निर्माण गर्ने यसले अभुतपूर्व रुपमा भूमिका पनि निभाएको पाइन्छ । “नेपाल सबै जातको फूलबारी हो” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिब्य उपदेशबाट यो एकीकरणले सबै जातजाती, सबै धर्म र संस्कृतिका जनताहरूको सहअस्तित्वालई स्वीकार गरेको देखिन्छ । एकीकरण पछि काठमाडौं उपत्यकामा प्रचलित नेवारी र पूर्वको बिजयपुर सेन राज्यमा किँरात धर्म र संस्कृतिलाई नखल्बल्याउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यी तथ्यहरूबाट यो एकीकरणले भौगोलिक एकीकरण मात्र गरेको थिएन, भावनात्मक एकीकरण पनि गरेको थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ । परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न जात, जाती, विभिन्न धर्म र संस्कृतिका बीचको सहअस्तित्व र सहिष्णुतालाई यो एकीकरणले अझ उचाईमा पु¥याएको पाइन्छ । सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा यो एकीकरणले निभाएको भूमिका अनुपम रहेको छ ।
वर्तमान नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरणको जगमा खडा भएको छ । एकीकरणले स्थापित गरेको यो जगलाई भत्काई दिँदा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलु्कको रुपमा नेपाल रहन सक्ने स्थिति छैन । जतिबेला नेपाली सत्ताले यो कटु सत्यलाई बेवास्ता गरेको छ, जसबाट मुलुकको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएको छ । यसका साथै एकीकरणले स्थापित गरेका मुल्य मान्यताहरू अहिले पनि झन् झन् सान्दर्भिक हुँदै आएका छन् । “नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल हो” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाई कम अर्थपूर्ण छैन । राष्ट्रियताको लागि ठूला ठूला भूगोल, जनसंख्या र शक्ति भएका भारत र चीन दुई देश बीच बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले सम्बन्ध र विश्वासमा सन्तुलन कायम गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको यो भनाइको मर्म हो । यो वास्तविकतालाई नबुझ्दा वा बुझेर पनि निहित स्वार्थवस कार्यान्वयन नगर्दा मुलुक पटक पटक संकटग्रस्त भएको सर्वविदितै छ ।
सरकार विदेशी षडयन्त्रमा दिन प्रतिदिन निस्कन नै नसक्ने गरी फस्दै गएको छ । यस्तो विदेशी षडयन्त्रलाई असफल गराउन पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको पश्चिमा विरोधि नीति निकै उपयोगी हुन्छ
एकीकरणपूर्व काठमाडौं उपत्यकामा अंग्रेजहरूले नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई समुल नष्ट गरी क्रिश्चियन धर्म स्थापित र विस्तार गर्ने, त्यसको जगमा टेकेर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।
केपुचीनको नेतृत्वमा पादरीहरूले त्यतिबेला गरेको कसरतले त्यहीकुरा देखाउँछ । धर्म र संस्कृतिको लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई विश्वासिलो बनाउन पादरीहरूको भूमिका निस्तेज गर्न आवश्यक ठानी पृथ्वी नारायण शाहले केपुचीनलाई निष्कासन गरेको कदम कम दुरदर्शी थिएन । विविध धर्म, संस्कृति र विविध जात जाती बीच द्वन्द्व गराउने पादरीहरू विरुद्ध यति कठोर कदम त्यतिबेला नचालेको भए एकीकरणको जग अहिले सम्म पनि टिक्ने थिएन होला । धर्म, एन.जि.ओ. र आइ.एन.जि.ओ. का आवरणमा पश्चिमाहरूले केही वर्ष यता जसरी द्वन्द्वको खेति गरि रहेका छन्, त्यसले नेपाली सामाजिक जीवनलाई अस्वाभाविक रुपमा खल्बल्याउँदै छ । धर्मको नाममा भई रहेको घुसपैठको प्रभाव कति खतरनाक छ भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न विवादस्पद युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनद्वारा एशिया प्यासेफिक समिटले देखाउँदछ । यस विषयमा पृथ्वीनारायण शाहको कठोर नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर खतरा उत्पन्न हुने परिदृष्यहरू देखिन थालेका छन् ।
वर्तमान स्थितिमा संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको लागि प्रयोग गरी नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने दुष्प्रयास वाह्य शक्तिहरूले गर्दै आएका छन् । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू उनिहरूको लाचार छायाँ बनिरहेको स्थितिमा मुलुकको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै गएको छ । त्रुटिपूर्ण विदेश नीतिका आधारमा पश्चिमा शक्तिहरूलाई खुलम खुल्ला रुपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको अखडा बन्दै गएको छ । अमेरिकाले इण्डो–पेसिफिक स्ट्रटेजीमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने कसरत गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अमेरिकी भ्रमण र जापानी विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले पुष्टि गरको छ । सरकार विदेशी षडयन्त्रमा दिन प्रतिदिन निस्कन नै नसक्ने गरी फस्दै गएको छ । यस्तो विदेशी षडयन्त्रलाई असफल गराउन पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको पश्चिमा विरोधि नीति निकै उपयोगी हुन्छ ।
नेपाल एकीकरण गर्दा र एकीकरणलाई बचाउनको लागि पृथ्वी नारायण शाहले अख्तियार गरेको पश्चिमा विरोधि नीतिको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ । एकीकरणलाई दीगो र टिकाउ बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले केपुचीन लगायतका पादरीहरूलाई निश्कासन गर्ने नीति जस्तै कठोर नीति अवलम्बन गर्न अब बिलम्ब गरियो भने मुलुक निकै जटिलतामा फस्ने निश्चित छ । पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बेवास्ता गर्नु वा ओझेलमा पर्नु नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमा खेलवाड गर्नु हो । समस्यै समस्याबाट घेरिँदै गएको मुलुकलाई बचाउन पृथ्वीनारायण शाहका नीति र विचारलाई पुनः स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बन्दै गएको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण भारतबाट आयातित...
चीनको आक्रामक 'वुल्फ वारियर' कूटनीति, के हुनुपर्छ ...
निजी क्षेत्रको टिप्पणी : बजेटमा सबै चिज समेट्न खोजि...
अमेरिकामा चीनकेन्द्रित चुनावी राजनीति : ट्रम्प र बा...
कोरोना परीक्षण क्षमताले नभ्याएपछि सुदूरपश्चिममा स्वाब संकलनमै रोक !
म्यानमारबाट फर्केका २६ जना यति पार्टी प्यालेसमा
कृषक निरुत्साहित हुनेगरी खाल्डोमा पुरिँदै तरकारी; यता २ रुपैयाँ भाउ छैन, भारतबाट ८५ टन आयात
कोभिड- १९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या ११, अर्का व्यक्तिको पनि मृत्युपछि कोरोना पुष्टि
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २९ सय १२ पुग्यो, थप २ सय ७८ जनामा संक्रमण
कोरोनाको जोखिम बढेपछि दैलेखमा निषेधज्ञा जारी
चीनले भारतलाई दियो चेतावनी– दुई देशको सम्बन्ध खराब नबनाऊ
गोरखापत्र संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक सुशील कोइरालासहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मेक्सिकोमा प्रदर्शनकारीले प्रहरी अधिकारीलाई लगाए आगो, तत्कालै निभाइयो (भिडियो)